Ndi nzuzu dika gi? : Martin Vrijland
Ndi nzuzu dika gi?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 2 September 2019	• 7 Comments
isi mmalite: tenor.com
Ndi nzuzu dika gi? Gịnị banyere? Banyere eziokwu dị mfe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile gbara gị gburugburu kwenyere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ okwu a pụrụ ịtụkwasị obi. Ndi mmadu n’eche n’ezie na ochichi onye kwuo uche ya di. Nwere ike iche:Ekweere m nke ahụ. Ọ nwere ike ọ gaghị aga mgbe ọ bụla otu ọ kwesịrị, mana anyị bi na ọchịchị onye kwuo uche ya n'ezie". Apụrụ m ịgwa gị ka ị gaa n'ihu ijidesie isi gị ike n'ájá dị nro na Netherlands ndị ọzọ? Ka ị gụọ ihe ọzọ, n'ihi ọchịchọ ịmata ihe gị?
Oge erugo mgbe ọ ga-ahụ ụwa dịka ọ dị. Agba ụwa gị elele kpamkpam. Site na ndagwurugwu ahụ ruo 'ebe a na ugbu a' a na-eji nyocha ụwa nke ezighi ezi. Nke ahụ ga - amalite na ndị mụrụ gị bụ ndị merela onwe ha ma nyefee gị mmemme ha. Ọ bụrụgodị na ha na-enupụrụ chọọchị ụka ma ọ bụ òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha isi. Eleghi anya ha onwe ha sitere na PvdA wee gaa Groenlinks ma obu ha bu ezigbo hippies.
Emebewo ihe niile nke ndụ gị site na nyocha ụwa nke kpebiri site na agụmakwụkwọ, usoro mgbasa ozi, egwu, ihe nkiri, akwụkwọ akụkọ, redio, ịntanetị, Facebook, na ndị ọzọ. Y’oburu na eche:Ee, nke ahụ nwere ezi uche. Anyị niile bi n'otu ụwa, yabụ anyị niile na-ahụ otu ihe ma ọ bụ na-erughị otu. Ọ kachasị site n'akụkụ dị iche; ọ bụrụ na amụrụ gị na mba ọzọ, mana anyị niile bi n'otu ụwa". Ọ nwere ike oge ị ga-eji hụ na ihe ọ bụla anya gị na ntị gị gụrụ n’oge ndụ gị bụ naanị otu ndị pere mpe. Ma eleghị anya, nde mmadụ na-arụ ọrụ maka obere klọb ahụ, mana nde mmadụ ahụ na-adabere n'ọrụ ha ma ha niile na-arụ ọrụ na obere akụkụ ahụ nke na ha anaghị eleghara nnukwu foto ahụ anya. Mana nke kachasị, emebeela ha onwe ha site na mgbe ha bụ nwata na ha amaghị nke ọma, dịkwa ka gị, kwenyere n'eziokwu ụgha a.
Eleghị anya ị kwenyere na ụlọ ndị eze enweghị ihe ha ga-ekwu. "Royallọ ndị eze bụ naanị emume. Ha nwere ọrụ azụmaahịa dị mkpa, n'ihi na mgbe ụfọdụ ha na-aga njem azụmahịa na mba ọzọ wee buru ndị isi nke nnukwu ụlọ ọrụ na-abịa azụmaahịa buru ibu. Ha di nkpa na nka. Ha bụ ndị bara uru n'ezie maka mba anyị.'Akọwara m ihe oyiyi nke ezinụlọ ndị Dutch nke ọma? Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, ọ nwere ike ịbụ na ị rọrọ nrọ Cinderella na onye isi n’ịnyịnya ọcha, na nne gị nwere ike jiri iko oroma na-ekwo ekwo. Enwere m ike ịkọ akụkọ ndị a ugboro ugboro? E jiri ihe onyonyo zitere gị nke ọma.
Ndị nnọchite anya ọ bụla, onye ọka iwu, onye agha, onye ọrụ obodo, onye ikpe, onye minista, onye ọrụ nyocha pụrụ iche (BOA) - na ndị ọzọ - na-a alleụ iyi maka okpueze. Yabụ na ezinụlọ eze. Signaturenye mbinye aka dị n'okpuru iwu ọ bụla? Ee, nke eze. "Eeh, ma a na-eme iwu ndị ahụ site na usoro ọchịchị onye kwuo uche ya ma nwee ọtụtụ mkparịta ụka gbasara nke ahụ n'ikpeazụ ị ga - ewepụta ihe edoziri dịka nkwekọrịta dị n'etiti ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị kachasị. Ndị otu ahụ nọchiri anya olu ndị mmadụ na-eso nsonaazụ ntuli aka ahụ". Still ka na-ekwenye na nke ahụ, nri? Afọ ole ka ị dị Gọọmentị ole ka ị hụburu? Ma i kwenyere na ya?
Ikwenyekwara na mkparịta ụka na redio na TV, dịka ya na Jeroen Pauw, Eva Jinek ma ọ bụ DWDD, bụcha eziokwu? Ikwenyeghi na nke a nwere ike ibute ntakịrị nduzi? Knowmara nke ọma na ndị ahụ nọ na tebụl ahụ abụghị ọrụ ebe a, na mkparịta ụka ahụ bụ naanị ịkwado ọdịdị nke nkatọ ma ọ bụ iwepụ mkparịta ụka ahụ na ajụjụ bụ isi.
Anyị na-anabata nke ukwuu nụchara anụcha, m ga-ekweta. Iji maa atụ, ama m site na nrigo nke Thierry Baudet Forum for Democracy (FvD) na nke a bụ ezigbo ọganiihu nke ike. Onye nwere ike inwe ezigbo nkwenye mmegide. Mgbe ị hụrụ usoro mkparịta ụka na TV, ị ga - eche n'ezie na ọ bụ eziokwu nakwa na ọ ga - emecha nwee onye na - anwa ịkatọ nkatọ. Ghara ịkụ aka m, mana a na m agwa gị nke a dịka ọmụmaatụ. A sị ka e kwuwe, eburu m amụma na ịrị elu FvD bụ naanị ebumnuche iwepu nkatọ na ọha mmadụ, site na ijikọ ya na 'ihe ziri ezi, echiche izu ọjọọ, ịhụ mba n'anya na nwanyị-enweghị mmekọ', wee tinye bọmbụ ahụ n'ikuku. iji rụọ ọrụ okpukpu abụọ. Anyị na - ahụ otu usoro n'ụwa niile ugbu a. Gụchaa isiokwu a juputara.
"N’ezie dị mma na Vrijland, nkọcha ahụ niile, mana gịnị ka anyị kwesịrị ime mgbe ahụ?"Ọ bụrụ na ị jụọ m ma bido, ọ bụ oge na - amalite mgbe ị ga - ahụ na foto gị nke ụwa bụ naanị foto agba nke mpụga: onyonyo nke eji eme mmemme. "Ee, ọ dị mma na!? M na-ebi n’ụwa a, yabụ na ọ nwere uche?"Ee, ọ nwere ezi uche, maka na anyị niile emeela mmemme. O putara na odi nma? "Ee, mana achọghị m ịbụ onye maverick. Ka m soro ndị ọzọ na-eso!Nwere ike, mana ị nwere echiche na ụwa na-eme nke ọma? Anaghị m ekwu maka oriri na ọ niceụ thoseụ ndị ahụ ị gara n'oge oge ọkọchị na ezumike izu 2 mara mma na ihe ọ thatụ thatụ ahụ niile na ụdị. Ana m ekwu maka mgbanwe ụwa maka ịkwụ ụtụ isi, gburugburu ebe obibi, agha, ọrịa na ihe ndị ọzọ. You chere na ihe na-aga nke ọma na Netherlands bụ n'ezie ọmarịcha obodo mara mma nke ahaziri ya mma.
Ee, ikekwe ị nọ n’usoro okwukwe ahụ:Anyị Dutch nwere ezigbo ụzọ kachasị mma n'okporo ụzọ na Europe niile. Anyị nwere ezigbo iwu dị mma maka, dịka ọmụmaatụ, iwu ihe owuwu, nwee ezigbo ụgbụ nchekwa ọha na oke njiri mara nke ọma. Anyị bụ ezigbo ndị ọchụnta ego nke mba ụwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana ịza ajụjụ dị oke mma". Anaghị m atụ anya n'ezie (ọ bụrụ na ị chere otu ahụ) na ị bịara ebe a na saịtị niile, mana ị ga - abụ onye na - agụ akwụkwọ ahụ. Otu ndị ahụ kwenyere n'eziokwu na nke a na - enwekarị nsogbu kachasi ike n'ịme ka ha nwee ike inweta ma bụrụ ndị ọtụtụ ndị bi na Netherlands na - arịa ọrịa antidepressants, mana nganga na-achọpụta na ihe adịghị mma ebe ọ bụla nwere ike ịbụ ihe akaebe nke 'ndị ohu kachasị mma'. Agbanyeghi na nkụcha dị nso: anyị na-ebupụ flags oroma na Princebọchị Onyeisi ma anyị ga-ekwenye na sistemụ na-etinye anyị oke nsogbu.
Nchịkọta kachasị mkpụmkpụ m nwere ike inye gị, nke ị nwere ike ịgakwuru gị, bụ:
Ejiri ndi otu ocha nke nwere ikike n’ebe akwukwo nile na ulo mgbasa ozi di ma nwekwaa echiche nke nnwere onwe ha n’aha nke ochichi onye kwuo uche ya. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị ọrụ ọzụzụ zụrụ azụ nke maara etu esi emeghachi omume na ihe ndị masịrị mmadụ. Mgbasa ozi nwere ike ime ka ụtọ ndị ahụ dị mma ma nyere aka ịhazi ha. Andlọ ọrụ mgbasa ozi na ndị na-elekọta mmadụ nọ ebe ahụ iji duzie nghọta gị na ịtụ votu abụghị ihe efu karịa ka usoro esi arụ ọrụ ọfụma. Ndị otu 'ndị na-enyocha ihe' ndị nwere ike ịbanye Inofizieller Mitarbeiter bụ GDR na-enyocha mgbasa ozi ọhaneze. A na-ahụkarị mmeghachi omume Facebook na Twitter site n'aka ndị agha ahụ, nke na-ezo n'azụ profaịlụ miri emi. Ndi n’igwe, akwukwo akuko, redio, igwe onyonyo, ihe egwu, egwu, na ndi ozo n’etucha oyuyo nke uwa. I bi n’ime otu mkpokọta Trumanshow; ụgha dị adị.
"Ekwetaghị m na Vrijland ebe ahụ. Nke ahụ dị m n'anya. Are gaghị agwa m na ọtụtụ mmadụ sonyere na ụgha ahụ". Ndị ahụ amaghị na ha na-emekọrịta ihe, n'ihi na ha na-ejupụta nanị obere mpaghara na ọ nweghị onye n'ime ha na-ahụ maka nnukwu foto ahụ. Ọ bụrụ n’ị ga-abanye n’ime ya n’ezie (dịka ọmụmaatụ site n’edemede ndị dị na weebụsaịtị a), ị ga-achọpụta na echiche ụwa gị ezighi ezi. Lezienụ anya, n'ihi na enwere ike ịrata gị ka ị banye n'ụgbụ nchekwa nke obodo. Obere ngọngọ nke ike na-achịkwa ụwa nwekwara mmegide n’akpa ya. "Ụzọ kachasị mma iji chịkwaa mmegide bụ ịdu onwe gịNdi ha n'ego. Akọwara m nke ahụ, tinyere ihe ndị ọzọ isiokwu a.
Ọ bụrụ na i werela nsogbu ahụ ka ị gụọ ihe ndị dị n'okpuru njikọ na-acha anụnụ anụnụ (ha bụ naanị 4), mgbe ahụ anyị bịara ajụjụ ahụ ka anyị kwesịrị isi hụ ụwa. Kedu otu esi eme ka ihe dị adị n'ezie ma ọ bụrụ na mmechi ahụ ziri ezi na e debere anyị n'ụdị nrọ ụwa niile? Edeela m ọtụtụ isiokwu na isiokwu ahụ, mana ị ga-ahụ ihe kachasị nso n'okpuru isiokwu 'ozi na-azọpụta ndụ maka ndụ gị dị ugbu a' na n'okpuru njikọ a. Ọ ga-amasị m ịgwa gị na m na-eme mgbalị a niile ịkọwara gị nke a n'enweghị mmasị ọ bụla. O mefuru m oke ihe na ndụ m. Enweghị mkpali okpukpe na-akwado ya (ekwere m na okpukpe bụ ịchịkwa uche) na enweghị mkpali ego na-akwado ya. Ana m eme nke a n'ihi na echere m na ọ bụ naanị ụzọ ịgbanwe. Ya mere, gụọ akụkọ ndị dị n'okpuru njikọ na-acha anụnụ anụnụ ma mee ka m nụ ihe ị chere.
Akwụkwọ edemede nye gọọmentị na mgbasa ozi: iwepụ akwụkwọ na ikpe na ụlọ ikpe ndị mmadụ
Site na mkpọchi na OpenUp! anyị ga-agbanwe mmemme ahụ
Victor Mids New Year Special kọwara na otú ị kwa ụbọchị na Mindf * ck ime
Tags: agba, etiti, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Trumanshow, ugha. eziokwu
Dick Klein Oonk dere, sị:
2 September 2019 na 23: 45
Ezigbo edemede ọzọ doro anya, Martin Enwere m ike ikwenye kpamkpam. Ya mere na-ekerịta na Twitter na FB.
Willem S dere, sị:
3 September 2019 na 00: 35
Ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ihe efu.
3 September 2019 na 08: 59
Ikekwe ọ dị mma ibu ụzọ mata na dị ka na UK, ụdị steeti anyị abụghị ọchịchị onye kwuo uche ya kama na usoro ọchịchị nke gọọmentị. Eze / nwunye nwere ọrụ na nke a. Ezi ihe omuma atu di na UK ebe Johnson boro Johnson choro ka enye ya nkwụchi. Nke a ọ bụ ọnọdụ anyị ka ọ bụ ụdị ọnọdụ a dịịrị anyị? O nwere ike bụrụ na etinyerela iwu ebe ahụ a na-akpọ Privey Council kpebiri ịkwụsị nzuko omeiwu. Nke a bụ ọnọdụ dị adị karịa nke a gosipụtara anyị.
Ikekwe ọ bụghị dị ka Martin na-akọwa ụlọ ihe nkiri ahụ n'ụzọ zuru oke, mana ka ……. Echere m na ọ bụ ọmụmaatụ nke ejiri gosipụta anyị niile foto nwere ike ịbụ eziokwu mgbe ụfọdụ.
3 September 2019 na 09: 36
Ọ bụ efere ncha.
Hụ onye nọ ọdụ n'ocheeze na Brussels (tinye 'Ursula' n'ọhịa ọchụchọ na weebụsaịtị a).
Iwu nke arristocracy ma zoo n'ile ka ochichi onye kwuo uche ya (ihe ndi n’eme ihe n’emegide) nke ndi mgbasa ozi rere n’igwe (ndi na - eme ihe na - eme ihe) na ndi n’oru ihe anyi bu ndi anyi na - akpo ‘ndi ochichi’.
Amalitere Brexit ka o gosipụta mba Europe ndị ọzọ na mgbochi ụwa na-eduga na nhụsianya na ntaramahụhụ ego NA iji weta paụnd na euro ahụ.
A na-egwuri egwu egwuregwu a nwa oge: maka ịtụkwasị obi.
Johnson nwere ike ịbụ hardliner nwa oge.
Ọ bụ ihe karịrị omume.
3 September 2019 na 16: 25
3 September 2019 na 23: 17
Ihe ha na-eme n’oge niile bụ ịtụba bọọlụ n’olileanya na anyị ga-anabata ya. Anyi anabatakwa nke ukwuu n’ọgbọ ndị na-adịbeghị anya nke na anyị bi ugbu a n’ụwa enweghị nkwekọrịta na enweghị ikpe ọ bụla.
Ọ bụrụhaala na ndị agha (na-ere Greek maka mkpụrụ obi) ka na-alụrụ eze ha (okpukpe) okpukpe ọgụ, agha ga-adị. Ndị a bụ ndị arụpụtara na-eweta ike na-adịghị mma. Anaghị esonye na ememme ncheta, na-elekwasị ike gị ebe a na ugbu a.
Aghụghọ (aghụghọ) anyị na-adabara maka ya adịgidewo n'oge gara aga. A na-akpọ nke ahụ mmehie, mmehie nke oge time
4 September 2019 na 08: 23
Na ọ bụrụ na anyị bụ ndị ochichi onye kwuo uche ya nke m na - ekwenyeghị na ogologo oge, anyị bi na mmebi iwu.
" LỌỌR:: ọgwụ ọgwụ na-agbanwe agbanwe bụ eziokwu! Nwoke dị afọ 80 loro mgbe mbụ ulere anụmanụ
Ihe ojoo Brexit aburula uzo atumatu »
Nleta ha: 4.203.191
Maasland op Coronavirus, udu ahihia na ihe omume amụma ndị ọzọ na-emezu